Chamisa Accuses Zimbabwe's Ruling Party of Killing Tsvangirai - allAfrica.com
The leader of the opposition MDC Alliance, Nelson Chamisa, has accused Zanu-PF of killing his predecessor Morgan Tsvangirai. Tsvangirai died from colon cancer in February 2018, shortly after President Emmerson Mnangagwa, and his deputy Constantino Chiwenga, paid a visit and offered him a pension, pledged to pay his medical bills and gave him ownership of a government house he was staying in.
MDC-T leader Nelson Chamisa has given away opposition beliefs its founding leader Morgan Tsvangirai may have been killed by his Zanu PF enemies. Read more »
Zimbabweans are set to go to the polls on July 30 to elect their next president. This would be the first time that the country is voting without former president Robert Mugabe on the ballot paper. see more »
President Emmerson Mnangagwa and Vice President Constantino Chiwenga visit Morgan Tsvangirai and wife Elizabeth Macheka at their residence in February 2018.
Mnangagwa and the late Tsvangirai.
President Emmerson Mnangagwa consoles Morgan Tsvangirai’s mother and other mourners at the MDC-T leader’s residence in on February 18.
The family of a Zimbabwean nurse Nomsa Ncube, who worked at a South African hospital where the late opposition MDC-T president Morgan Tsvangirai was admitted, suspects that her ... Read more »